ခွေးတွေအတွက် demodectic Mange ကဘာလဲ? | Dogs World
ခွေးတွေအတွက် demodectic mange ကဘာလဲ?
Scabies ဖြစ်ပါတယ် သွင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရောဂါ အရေပြား၏မျက်နှာပြင်နှင့်နား၌တွေ့ရသောဤသွင်းခြင်းများသည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကိုခြစ်ရာကျ။ ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာရစေနိုင်သောအရေပြားပြောင်းလဲမှုများကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ အဲဒီမှာ အနာဖေးများစွာသောမတူကွဲပြားမှု တစ်ခုချင်းစီကိုမတူညီသော mite ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်၊ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်၎င်းသည်တွေ့ရှိရပါသည်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်အနာဖေးအကြောင်းပြောမယ်၊ demodectic mangeခွေးများတွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သော်လည်းကြောင်များတွင်တွေ့ရခဲသည်။ ဒီရောဂါကူးစက်နိုင်စွမ်းသောသွင်း များသောအားဖြင့်ဆံပင် follicles ၏အတွင်းပိုင်း inhabits၄ င်းတို့သည်မိခင်က ၄ င်းတို့ကလေးငယ်များနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် ၄ င်းတို့ဘ ၀ ၏ပထမနေ့၌ကူးစက်သည်။
1 demodectic mange ဆိုတာဘာလဲ။
2 Mange ငယ်ရွယ်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသောခွေးများတွင်တွေ့ရသည်
demodectic mange ဆိုတာဘာလဲ။
ဒါဟာများသောအားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် ခွေး၏ပုံမှန်အသားအရေ ခုခံအားကျဆင်းမှုနှင့်ခုခံအားစနစ်သည်ဤဘက်တီးရီးယားများ၏လူ ဦး ရေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အခါထိုကပ်ပါးကောင်များသည်ပျံ့နှံ့သွားသော်လည်း၎င်းတို့သည်၎င်းတို့တွင်ရှိသည်။ အလားတူပင်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ခွေးအတွက်မျိုးစိတ်ရှိပါတယ် injai modedex ပိုပြီးရှည်လျားသည်နှင့်ဆိကြည်ဂလင်းတွင်တည်ရှိသည်သောလည်းရှိပါတယ် demodex comeu အရာအနည်းငယ်တိုတောင်းသည်နှင့်အရေပြားအပေါ်ယံ၏အပေါ်ယံဇုန်တွင်တည်ရှိသည်။
ဒီ Mange မျိုးကိုအများဆုံးရလေ့ရှိတဲ့ခွေးတွေဟာဆံပင်တို၊ အလင်းရောင်နဲ့သန့်ရှင်းတဲ့သားပေါက်တွေဖြစ်တယ်။
ခွေးများတွင်ဤအခြေအနေကိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဒေသတွင်းနှင့်တစ်ခုယေဘူယျသောအခြားတအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏အသက်သည်လည်းအရေးကြီးသည်။ ဒေသဆိုင်ရာ Mange ရှိခွေးငယ်များတွင်မူများသောအားဖြင့်ပထမလများအတွင်းပေါ်လာတတ်သည်။ ဒီမဆိုကုသမှုမပါဘဲအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ ခြောက်ပတ်အတွင်းသော်လည်း၊ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ဤသည်ယေဘူယျအနာဖေးများဖြစ်လာနိုင်သည်၊ ကာကွယ်ရေးအတွက်ကျဆင်း၎င်းသည်များသောအားဖြင့် ဦး ခေါင်းကိုမကြာခဏထိခိုက်နိုင်ပြီးသားမွေးများနှင့်ယားနာမပါသောproduceရိယာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်၊ သို့သော်များသောအားဖြင့်ခွေးများသည်ခြစ်ရာမကျပါ။
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် အထွေထွေ mange နှင့်အတူငယ်ရွယ်ခွေး၎င်းသည်ဘဝ၏ပထမနှစ်တွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောအပြင်အရေပြားကိုပြင်းထန်စွာပျက်စီးစေခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်၏နေရာများပိုမိုများပြားသည်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်မှု ၎င်းသည်ခွေးတစ်ကောင်အားမျိုးရိုးလိုက်ရောဂါဖြစ်သည့်အားပြင်းစွာခြစ်ရာဖြစ်စေနိုင်သည်။
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် mange နှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူခွေး ယေဘူယျအားဖြင့်ခွေးငယ်စဉ်ကပြသနာများရှိခဲ့သော်လည်းထိုအချိန်တွင်ပြေလည်ခြင်းမရှိဟုပြောနိုင်သည်။ ရောဂါဗေဒကြောင့်ကပ်ပါးကောင်များပွားများသည့်နေရာတွင်လည်း၎င်းသည်အလိုအလျောက်ပေါ်လာနိုင်သည်။
ဒီအခြေအနေ များသောအားဖြင့်အရေပြားခြစ်ခြင်းဖြင့်ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိသည် နက်ရှိုင်းသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းဖြင့်အရေပြားကိုညှစ်လိမ့်မည်။ အသားအရေနှင့်သွေးပေါ်လာသည့်တိုင်အောင်အရေပြားကိုညှစ်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ နောက်မှသင်လုပ်နိုင်သည် acarogramဤသည်သည်မြင်တွေ့ရသောပုံစံအားလုံး၏အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ကြက်ဥနှင့်လောင်းများစွာရှိလျှင်ဖြစ်စဉ်သည်တက်ကြွသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် ဒေသတွင်း scabies၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုကန့်သတ်ထားသောကြောင့်ယင်းကိုမကုသနိုင်ပါ။ သို့သော်လိမ်းဆေး amitraz ကိုယေဘူယျသူများအတွက်သုံးနိုင်သည် ကုန်ပစ္စည်းများပိုမိုလွယ်ကူအရေပြားဝင်နိုင်အောင်အပြည့်အဝရိတ်Pyodermas နှင့် acaricidal ရေချိုးနည်းတို့ကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သင်ကုသနိုင်သည်။
သင်တို့သည်လည်းအချို့ပေးနိုင်ပါသည် ခံတွင်းကုသမှု milbemycins နှင့်အတူဖြစ်သကဲ့သို့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ရောဂါများ » ခွေးတွေအတွက် demodectic mange ကဘာလဲ?
ဟယ်လို။ ငါမှာဆံပင်မထွက်လာတဲ့မျက်လုံးအနားကွပ်ရှိပြီး ၂ နှစ်အရွယ်ဆတ်တာရှိတယ်၊ သူတို့က demodectic mange ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်၊ ငါက bravecto ပေးနေတယ်၊ ​​ဆေးလုံးကြီးကအရမ်းကြီးတာ၊ ၄ လမှ ၅ လအထိအမဲ လိုက်၍ သူမချွတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းဆေးပြားကို ဆက်၍ ပေးရမည်လားသို့မဟုတ်၎င်းကိုသူပေးနိုင်ရန်အခြားအရာတစ်ခုခုရှိပါသလားဆိုတာကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်။ ကောင်းပြီ၊ မျက်စိရဲ့စက်ဝုိင်းပဲ။